Hiigsi & Hayaan: Maxaa dhib laga soo maray yagleelka Jaamacadda Bariga Afrika (EAU)? (daawo qaybtii 2aad) – Radio Daljir
Hiigsi & Hayaan: Maxaa dhib laga soo maray yagleelka Jaamacadda Bariga Afrika (EAU)? (daawo qaybtii 2aad)
Oktoobar 2, 2018 1:53 b 0
Hoos kaga bogo oo la qaybso ardayda sannadkaan ku cusub Jaamacadda Bariga Afrika iyo inta aan ka warqabin waxa la soo maray iyo waxa laga soo maray.
HIIGSI & HAYAAN 59 Wararka 26315
Wakiilka QM ee Soomaaliya Nicolas Haysom oo shaqadii la wareegay
Sheeko Gaaban: Guuldarro Jacayl god ma loo galaa! (Taxanaha 2aad – maqal & muuqaal)